Gbasara Anyị - Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Usoro Jitai's Quality Control
Site na onboarding nke akụrụngwa ruo oge ngwaahịa anyị batara n'aka ndị ahịa anyị, Jitai na-arụ ọrụ nke usoro mmesi obi ike yana usoro njikwa njikwa nke na-eme ka ngwaahịa anyị kwekọọ n'ụkpụrụ nrụpụta nke ụlọ ọrụ ngwugwu hermetic.
Na-abanye na akụrụngwa
Nnyocha nke Akụrụngwa
Nkwenye dị mma na-amalite tupu akụrụngwa echekwara ọbụna. N'oge usoro nnabata nnabata, a na-ahọpụtaghị ihe maka nyocha dị mma (mgbe emechara mkpebi banyere ma ịbanye n'ụgbọ mmiri ahụ), ọ bụrụ na emere mkpebi dị otú ahụ, a ga-ehichapụ mbupu ya niile, nyochaa ya zuru ezu, obere ezughị oke na-echekwa ma na-egbu maramara, ma na-echekwa ngwaahịa mgbe ahụ.
Mgbakọ na Brazing
Nnyocha Anya Anya na Ule Nleta Mbụ
Na-esochi nzukọ izizi na brazing, ngwaahịa ọ bụla na-enyocha nyocha ọhụụ nke onye na-esochi nnwale nnwale nke mbido.
Mkpuchi bonding ogo nnyocha.
Emechara ngwaahịa nnyocha
Nnyocha ngwaahịa zuru ezu nke gụnyere nyocha nke ọdịdị, ihe owuwu, ikpuchi ọkpụrụkpụ, na nyocha nke helịkal gas nke abụọ.
Pin ike ọgwụgwụ ule, nnu ịgba corrosion eguzogide ule na ihu igwe ịme anwansị akụrụngwa na-anwale ngwaahịa arụmọrụ
Ngwaahịa niile n'otu n'otu agụụ-juru n'ọnụ na a deoxidizing desiccant fanye, mgbe ahụ, ọbọp ke a oyi akwa nke afụ Kechie. Mgbalị ndị a na-ekwe nkwa na ngwaahịa ọ bụla Jitai nyefere gị bụ otu oke mma dị ka mgbe ọ hapụrụ ụlọ ọrụ.